सिल्टल: क्र्लोबोर्डबोर्ड एक्स एक्सटेक्शन प्लेटफर्म कसरी प्रयोग गर्ने
DIY वेब स्क्रैप सबै को लागि यति धेरै ट्यूटोरियल इन्टरनेट मा. यदि तपाइँले मात्र डेटा को एक सानो मात्रा निकाल्न आवश्यक छ भने, ट्यूटोरियलले मद्दत गर्न सक्छ. तर यदि तपाईले नियमित आधारमा डेटाको ठूलो भोल्युम निकाल्न आवश्यक छ भने, तपाइँले अनुभवी तेस्रो पक्ष वेब स्क्रैपिंग कम्पनी भर्ना गर्नुपर्छ. क्रलबोर्डबोर्ड यस्तो सेवा प्रदायकहरूमध्ये एक हुन्, र धेरैजना मानिसहरू यसको वेब स्क्रैपिंग कार्यका लागि प्रयोग गर्दै छन्।. प्लेटफार्म धेरै कुशल छ. त्यसोभए, सिफारिस गरिएको छ जुन नियमित रूपमा डेटाको ठूलो मात्रामा स्क्रैप गर्न आवश्यक छ.
यसको क्षमताको बावजूद, यो पनि प्रयोग गर्न सजिलो छ. प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न आवश्यक सरल चरणहरू यहाँ उल्लिखित छन्.
यो क्रमा क्लिक गरेर क्रल ब्राउजर वेब स्क्रैपिंग अनुरोध पृष्ठ मा जानुहोस्. दर्ता फारम उचित रूपमा भर्नुहोस्. त्यहाँ पहिलो नाम, अन्तिम नाम, कम्पनी इमेल ठेगाना, र कार्य भूमिकाको लागि क्षेत्रहरू छन्. जब तपाईं सकिएमा, केवल साइन अप बटन क्लिक गर्नुहोस्. एक स्वचालित मेल तपाईले प्रमाणिकरणको लागि प्रदान गर्नुभएको ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ. तपाईंको नयाँ क्रलाबोर्ड कार्ड सक्रिय गर्न ईमेल खोल्नुहोस् र प्रमाणीकरण लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्.
यो चरणको प्राथमिक उद्देश्य साइट क्रल गर्न थप छ, तर तपाईंलाई साइट समूह सिर्जना गर्न पहिलो आवश्यकता पर्दछ।. साइटसमूह साइटहरु को एक समान संरचना हो. यो मानिसहरूको लागि हो जुन सामान्यतः स्क्रैप डेटा धेरै पटक साइटहरूमा एकै पटकमा आवश्यक हुन्छ.
साइटसमूह सिर्जना गर्न, "नयाँ साइटसमूह सिर्जना गर्नुहोस्" लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्. यो साइटसमूह चयन बक्सको दाहिने छेउमा अवस्थित छ. त्यस पछि, तपाई अब साइट साइटको सम्बन्धित सबै साइटहरू जोड्न सक्नुहुन्छ जो लिंकको पृष्ठमा शीर्ष दायाँ कुनामा अवस्थित थप्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गरेर अर्को पछि. त्यसपछि, एकद्वारा एउटा साइट चयन गर्नुहोस्.
तपाईको साइट समूहको लागि रुचाइएको अद्वितीय नाम प्रदान गर्न साइट समूह सिर्जना सन्झ्यालमा जानुहोस्. याद गर्नुहोस् कि साइटसमूहको सबै साइटहरू यस्तै ढाँचामा हुनु पर्दछ अन्यथा, तपाईले सही सामग्री पाउन सक्नुहुन्न.
साइटसमूहको महत्त्व बुझ्न, उदाहरणका लागि नौकरी लिस्टिङ साइटहरू लिनुहोस्. यदि अनुरोध गरिएको कार्यले जागिरको बोर्डबाट कार्यहरू स्क्रैप गर्न हो भने, त्यसपछि तपाईंलाई प्रकार्यसँग मेल खाने साइट साइट सिर्जना गर्न आवश्यक छ र साइटसमूहका सबै साइटहरू नौकरी सूचीबद्ध साइटहरू हुनेछन्।.
यस स्क्रिनमा आवश्यक फिल्डहरूको अनुसार, तपाईंलाई डेटा निष्कर्षण, डिलिवरी ढाँचा, र डेलिभरीको विधि आवृत्ति छनौट गर्न आवश्यक छ।. (3 9) डेटा स्क्रैपिंग को आवृत्ति दैनिक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र अनुकूलन हो.
डिलिवरी ढाँचाको लागी, तपाईं XML, JSON, र CSV बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ. र डिलिवरी विधिको लागि, तपाईंलाई एफटीपी, ड्रॉपबक्स, अमेजन S3, र REST एपिआई को बीच चयन गर्न आवश्यक छ.
स्क्रीन अतिरिक्त जानकारीको लागि हो. यो प्रयोगकर्ताहरूका लागि तिनीहरूको वेब स्क्रैपिंग कार्य थप वर्णन गर्न हो. यद्यपि यो वैकल्पिक छ, थप जानकारी समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईले आफ्नो कार्य वर्णन गर्नुहुने छ, अधिक सेवा सेवा प्रदायकले तपाईलाई चाहेको कुरा बुझ्न सक्नेछ, र यसले एक राम्रो परिणाम सिर्जना गर्नेछ।.
तपाईं यो पर्दामा केहि मान-जोडिएका सेवाहरूको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूमध्ये कुनै पनि अनुक्रमणिका, फाइल विलय गर्दै छन्, छवि डाउनलोडहरू, र एक्सटेन्टेड डिलीवरी हो.
यहाँ, तपाइँ केवल "व्यवहार्यताको जाँच पठाउनुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नु आवश्यक छ।. उद्देश्य तपाईंको सेवा कार्य सम्भव छ भनेर जाँच गर्न सेवा प्रदायकको लागि हो. यदि तपाईंको कार्य व्यावहारिक छ वा छैन भने तपाइँलाई सूचित गर्ने इमेल पाउनुहुनेछ. यदि यो हो भने, तपाईं अहिले जान सक्नुहुन्छ र भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ. एक पटक तपाईंको भुक्तानी पुष्टि भएपछि, क्रलबोर्ड टोलीले कार्यमा परिवर्तन गर्नेछ.
भुक्तान गरे पछि, तपाइँले तपाइँको रुचाइएको डिलीवरी विधि मार्फत तपाईले निर्दिष्ट गर्नुभएको ढाँचामा आफ्नो डाटा फिडको पर्खाइमा पर्दछ। Source .